Ny Galaxy S11 dia hamboarina finday dimy | Androidsis
Ny volan'ny Galaxy S11 dia haseho amin'ny volana Febroary 2020 amin'ny fomba ofisialy. Sehatra izay hamela antsika hiova, toy ny fakan-tsary tsaratsara kokoa, ankoatry ny sasany batterie lehibe kokoa. Toy ny tamin'ity taona ity, Samsung dia hanolotra maodely marobe ao anatin'io sokajy io, mba hananan'ny mpampiasa safidy maromaro hisafidianana.
Ny data vaovao dia efa milaza amintsika ny isan'ny telefaona azontsika antenaina amin'ity andiany Galaxy S11 ity. Raha izany dia, mety ho maodely dimy ny fitambarany, satria ny sasany amin'izy ireo dia hanana kinova roa azo, toy ny efa fantatra. Mitombo be toy izany ny isan-karazany.
Amin'ity indray mitoraka ity, ny telefaona rehetra dia hanana kinova miaraka amin'ny 5G. Raha ny Galaxy S11 Plus, ity modely ity dia ho tonga mivantana ary amin'ny kinova misy 5G ihany. Raha ny maodely roa hafa kosa dia hanana kinova misy 4G sy 5G. Ny fanoloran-tenan'i Samsung mazava ho an'ny 5G, izay hitombo hatrany amin'ny taona 2020.
Maneho fiovana izany raha ampitahaina amin'ny taranaka amin'ity taona ity, izay namela maodely 5G ho anay. Hitan'ny orinasa ny fomba fanaparitahana tambajotra 5G manerantany, izay midika fa mitombo ny fangatahana an'ity karazana fitaovana ity. Mikatsaka ny hiomana àry izy ireo.
Hanana izany isika telefaona roa misy 4G ary telo misy 5G ao amin'ity faritra misy ny Galaxy S11 ity. Ny fiovana lehibe dia ny maodely mora indrindra, ny Galaxy S11e dia hanana dika mitovy 5G ihany koa amin'ity indray mitoraka ity. Ka ny orinasa dia mitady hahatratra ny mpampiasa betsaka indrindra amin'ity fomba ity.
Hahafantatra tsikelikely ny momba ity farany farany ambony amin'ny marika Koreana ity isika. Ireto Galaxy S11 ireto dia antenaina hiseho alohan'ny MWC 2020. Ny media sasany dia efa nanondro ny 18 Febroary toy ny daty fametrahana anao, fa mbola tsy zavatra fantatsika tsara izao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Finday » Ny elanelan'ny Galaxy S11 dia hanana telefaona dimy
Ny processeur 5G an'ny Mediatek ho an'ny telefaona finday dia efa manana daty fanombohana